Abakhiqizi be-fiberglass abahambahambayo nabahlinzeki - China i-Fiberglass Roving Factory
I-E-ingilazi ehlanganisiwe yePhaneli ehambayo
1.For okuqhubekayo panel udini inqubo camera nge Sizing-based sizing iyahambisana polyester unsaturated.
2.Delivers isisindo esincane, amandla aphezulu namandla amakhulu okuthelela,
futhi yakhelwe ukwakha amaphaneli asobala namata wamapaneli angaqondakali.
I-E-ingilazi ehlanganisiwe ifuna ukugcoba phezulu
Runnability 1.Good ukusebenza sishaye,
Isivinini esimanzi esimanzi,
Ukususwa kalula kwama-bubbles,
Akukho ukubuyela emuva ngama-engeli abukhali,
Izici ezinhle kakhulu zomshini
Ukumelana 2.Hydrolytic ezingxenyeni, efanelekayo ngesivinini inqubo fafaza-up ngamarobhothi
I-E-ingilazi Ehlanganisiwe Yokuzulazula Kwentambo Yomoya
1.Iklanyelwe inqubo ye-intambo ye-FRP, ehambisana ne-polyester engafakwanga.
Umkhiqizo ohlanganisiwe wokugcina wethula impahla enhle kakhulu,
3. Isetshenziswa kakhulu ekwenzeni imikhumbi yokugcina kanye namapayipi ezimbonini zikaphethiloli, amakhemikhali nezimayini.
I-E-ingilazi ehlanganisiwe ifuna i-SMC
I-1.Yakhelwe isigaba se-A ebusweni nenqubo yesakhiwo ye-SMC.
I-2 ifakwe isilinganisi sokusebenza okuphezulu esihambisana ne-resin ye-polyester engafakwanga
ne-vinyl ester resin.
Iqhathaniswa ne-SMC yendabuko ezulazulayo, Ingaletha okuqukethwe kwengilazi ephezulu kuma-SMC amashidi futhi inempahla enhle emanzi futhi enhle kakhulu.
Kusetshenziswa ezingxenyeni zezimoto, eminyango, ezihlalweni, kubhavu, nasemathangini amanzi nakwizinsiza zensimbi
Ukuqondisa okuqondile kwe-LFT
Ihlanganiswe ne-sizane-based sizing ehambisana ne-PA, PBT, PET, PP, ABS, PPS ne-POM resins.
I-2.Iyasetshenziswa kakhulu ezimbonini zezimoto, i-electromechanical, i-appliance yasekhaya, ukwakha nokwakha, i-elekthronikhi nogesi, ne-aerospace
Ukuqondisa okuqondile kweCFRT
Isetshenziselwa inqubo ye-CFRT.
Imicu ye-fiberglass yayingaphandle ingavuleki kusuka emigqonyeni eshalofini bese ihlelwa ngendlela efanayo;
Izintambo zahlakazwa ukungezwani futhi zashiswa ngumoya oshisayo noma i-IR;
Isakhi esincibilikisiwe se-thermoplastic sanikezwa yi-extruder futhi samithisa i-fiberglass ngokucindezela;
Ngemuva kokupholisa, kwakhiwa ishidi lokugcina le-CFRT.
Ukuqondisa okuqondile kwe-Filament Winding
Ihambisana ne-polyester engagcwalisiwe, i-polyurethane, i-vinyl ester, i-epoxy ne-phenolic resins.
Ukusetshenziswa okuyinhloko kufaka phakathi ukwenziwa kwamapayipi e-FRP obubanzi obuhlukahlukene, amapayipi anomfutho ophakeme wokushintshwa kukaphethiloli, imikhumbi yengcindezi, amathangi okugcina, kanye nezinto zokwambathisa ezifana nezinsimbi zombuso kanye ne-tube tube.
I-E-ingilazi ehlanganisiwe ifuna i-GMT
I-1.Ifakwa ngosayizi osuselwe ku-silane ohambisana ne-resin ye-PP
Kusetshenziswe kwinqubo ye-mat edingekayo ye-GMT.
Izicelo zokusetshenziswa kokuphela: ukufakwa kwezimoto, i-acoustical, ukwakha nokwakha, amakhemikhali, ukupakisha kanye nokuhamba ngezinto eziphansi.
I-E-ingilazi ehlanganisiwe izungeze i-Thermoplastics
I-1.Iyenziwe ngosayizi osuselwe ku-silane ohambisana nezinhlelo eziningi ze-resin
ezifana ne-PP, AS / ABS, ikakhulukazi iqinisa i-PA ukuthola ukumelana kahle kwe-hydrolysis.
I-2.Typically eyenzelwe inqubo ye-twin-screw extrusion yokwenza ama-granules e-thermoplastic.
Izicelo ze-3.Key zifaka izingcezu zokubopha ujantshi wesitimela, izingxenye zezimoto, izicelo ze-elactrical & electronic
I-E-ingilazi Ehlanganisiwe Izulazula Ekukhipheni kweCentrifugal
I-1.Ifakwa ngosayizi osuselwe ku-silane, ehambisana nezinhlaka ze-polyester ezingafakwanga.
Ukwenziwa kwe-sizing yokuphathelene okusetshenzisiwe kusetshenziswa inqubo ekhethekile yokukhiqiza okuhlangana ndawonye kuholele ekusheshiseni okukhulu kokuphuma kwamanzi nesidingo esiphansi kakhulu se-resin.
3.Nika amandla ukulayishwa okuphezulu kokugcwalisa ngakho-ke ukwenziwa kwepayipi okubiza kakhulu.
I-4.Iyasetshenziswa kakhulu ekwenzeni amapayipi we-Centrifugal Casting wezincazelo ezahlukahlukene
kanye nezinqubo ezithile ezikhethekile zeSpay-up.
I-E-ingilazi Ehlanganisiwe Yokuzulazula
I-1.Iyiboshwe ngosayizi okhethekile osuselwe ku-silane, ohambisana ne-UP ne-VE, eletha ukumunca okuphezulu kakhulu kwe-resin kanye ne-choppability enhle kakhulu,
2.Final imikhiqizo esiyinhlanganisela ukuletha ephakeme ukumelana amanzi kanye omuhle amakhemikhali ukugqwala ukumelana.
I-3.Ijwayele ukusetshenziselwa ukwenza amapayipi e-FRP.
Ukuqondisa okuqondile Ukwaluka
Ihambisana ne-polyester engagcwalisiwe, i-vinyl ester kanye nezinhlaka ze-epoxy.
2.Its impahla enhle kakhulu yokwaluka iyenza ifanele umkhiqizo we-fiberglass, njengendwangu yokuzulazula, amacansi wokuhlanganisa, umata othungiwe, indwangu enama-axial amaningi, ama-geotextiles, ihele elibunjiwe.
Imikhiqizo yokusetshenziswa kokuphela isetshenziswa kakhulu ekwakheni nasekwakhiweni, amandla omoya kanye nezicelo ze-yacht.